Harmonic Patterns1 Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha Harmonic Patterns1 Forex Tusiyaha
Harmonic Patterns1 Forex Tusiyaha waxaa bixisey by Islam Khaled oo waa tilmaame aad u dhameystiran oo weli si sahlan loo isticmaali. Waxay ku salaysan tahay isticmaalka Fibonacci iyo tilmaamayaasha zagzaagga ah. Iskudarka The of this laba tilmaamayaasha waxa ay taasi ka mid ah tilmaanta ugu fiican halkaas diyaar u yahay ganacsatada intraday. Waxaa inta badan diiradda on Ganacsi retracements ah.
Waa maxay retracement Forex? Retracements yihiin dhaqdhaqaaqa dhaca ka dib markii suuqa leeyihiin dhaqaaqo ka badan masaafo dheer midkood kor ama hoos. Xaaladaha intooda badan retracements waxay ka dhigi ganacsatada badan si ay u sameeyaan khasaaraha tan iyo ganacsatada ku jahwareer. Waxaad ka heli ganacsatada gelinayn si bilowga retracements tan iyo ganacsade ma aqaano hadii arrimuhu suuqa waxaa sii socdo ama aan. Sidoo kale mararka qaarkood waxaad ka heli doontaa ganacsatada gelinayn Xirfado soo horjeeda marka ay goori goor tahay galay retracement suuqa. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo tani tilmaan Harmonic Patterns1, ganacsade si raaxo leh ku ganacsan kartaa cabsi la'aan ah ee is dhex murgaan galay retracements Forex ee.
Noocyada tilmaame Harmonic Patterns1 / barbaro zagzaagga ah sida ay jidka suuqa ayaa la filayaa inuu isu bedbeddelaan. line ee zagzaagga ah u beddelayo midabka u dhaxeeya casaan iyo buluug. Haddii arrimuhu guud hoos waa, ka dibna sida zagzaagga ah casaan doonaa midabka halka haddii arrimuhu qiimaha suuqa guud kor waa, zagzaagga ah waxay noqon doontaa buluug. Sidaa darteed marka laga reebo ka faa'iideysanayaan ka bed zagzaagga, ganacsade ah ay sidoo kale qaban karo isaga ama iyada Xirfado muddo dheer ilaa midabka ah ee isbedelka line zagzaagga. Tusaale ahaan haddii ganacsade ah meelaha si iibiyay iyo heerka uu ama ay bartilmaameedsadeen la gaaro, ganacsade ah ayaa weli sii wadi kartaa si iibiyay ilaa midabka ah ee khadka zagzaagga badala si buluug.
Laakiin haddii ganacsade ah ayaa doonaya in la furo xirfadaha iyo qaadan faa'iidada gaaban, waxa uu sidoo kale soo dhaweeyay in la isticmaalayo Tilmaame this. tilmaame waxay muujinaysaa heerka qiyaas at kaas oo kasii darto suuqa ayaa lagu wadaa inuu dib u celin. Waxaa bandhigayaa / foomamka saddexagal dhibcaha kaas oo ah ganacsade u isticmaali karaan si ay u dejiyaan khasaaraha stop iyo qaadan faa'iidada.
Markaas tilmaame this sidoo kale soo bandhigay fallaadh oo muujinaysa jihada ay arrimuhu. Haddii arrintan ay tahay mid kor u tilmaanta muujiyaan doonaa muujin fallaadh 'Taxana Up' iyo qeybsanaan ku xigeenka.
Sida loo furo jagooyinka la isticmaalayo Tilmaame Harmonic Patterns1.
ganacsade waa in la furo amar iibsan marka ay jirto a 'daaji Up' arrow, iyo haddii zagzaagga ah waa buluug. ganacsade waa in markaas dhigay isaga ama iyada stop khasaaraha ugu hooseeyo hore sida ka muuqata sida zagzaagga ah tub hooseeya dhawaan. faa'iido wacay waa in lagu rakibaa heer ugu macquul ah oo si fudud loo heli karo. Waxaad isticmaali kartaa heerka Fibonacci in ay go'aan ka halkaas oo si rid aad faa'iido ka qaadataan.
ganacsade waa in la furo amar iibiso marka uu jiro a 'daaji Down' arrow, iyo haddii zagzaagga yihiin cas. ganacsade waa in markaas dhigay isaga ama iyada stop khasaaro at sare hore sida ka muuqata barta zagzaagga ugu badan dhawaan ka leexdo. faa'iido wacay waa in lagu rakibaa heer ugu macquul ah oo si fudud loo heli karo. Waxaad isticmaali kartaa heerka Fibonacci in ay go'aan ka halkaas oo si rid aad faa'iido ka qaadataan.
Tusaale Xirfado furay isticmaalayo Tilmaame Harmonic Patterns1.
Harmonic Patterns1 Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
Harmonic Patterns1 Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo Harmonic Patterns1 Forex Indicator.mq4?
Copy Harmonic Patterns1 Forex Indicator.mq4 in Directory Metatrader aad / khubaro / tilmaamayaasha /
Tusiyaha Harmonic Patterns1 Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar Harmonic Patterns1 Forex Indicator.mq4 4 Chart?
article PreviousElliot oscillator Wave Forex Tusiyaha
Next articleScalper Market Pro 5.5 Forex Tusiyaha